Igwe anaghị agba nchara efere, Eyi eguzogide ọgwụ Steel efere, Nnukwu ifuru ite - Hongyi
Hot akpọrepu carbon enweghị nkebi ígwè anwụrụ
Nkenke ígwè anwụrụ
Alloy ígwè anwụrụ
Square ígwè anwụrụ
Akụkụ anọ nchara anwụrụ
Yiri efere ígwè na-eguzogide ọgwụ
Shandong Hongyi New Ihe Co., Ltd. bụ a enweghị nkebi nchara anwụrụ mmepụta, ahịa, lọjistik, mba ahia dị ka otu n'ime ike ụlọ ọrụ. The ụlọ ọrụ nwere ike hazie dị iche iche ihe na nkọwa nke enweghị nkebi ígwè anwụrụ na miri nhazi azụmahịa. Eguzo zuru ezu zuru oke, ụlọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị ụlọ iri abụọ nke ụlọ shandong na-enweghị nchara nchara mmepụta, usoro mmepụta ahụ dị elu, teknụzụ siri ike, nchọpụta pụtara zuru ezu, njirimara ngwaahịa ahụ dị mma, na-enwe ezigbo aha na ewu ewu na ụlọ ọrụ.
Akụkụ anọ tube ngwugwu akụkụ anọ ígwè tubi ...
Factory ozugbo price 30mm SS square ígwè pip ...
Esi mmiri ọkụ alloy anwụrụ alloy ígwè enweghị nkebi anwụrụ ngwaahịa
High nkenke oyi mmasị nkenke ígwè anwụrụ ...
Hot akpọrepu carbon enweghị nkebi ígwè anwụrụ tube
Shandong Hongyi Ihe Co., Ltd.
Ngwaahịa anyị soro ISO9001 na API sistemụ, Na-akwado nyocha nke atọ.
Anyị ahịa nwere ike zitere ọhụrụ e kwuru ozugbo ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-enye gị ọzọ ego dị ka nnukwu ibu.
24 awa ọrụ na ọkachamara oru nkwado.
Ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ: ngwaahịa: anwụrụ ọkụ na-ekpo ọkụ carbon steel, nke na-enweghị ntụpọ, ọkpọkọ nchara ígwè (ọkpọkọ ọkpọ mmiri), nkenke nkenke, akụkụ anọ / akụkụ anọ, nkedo nchara na-eguzogide, igwe anaghị agba nchara, efere nchara alloy, ite ifuru corten na nchara corten. ihuenyo ...
232020 / Nọvemba
Enweghị nsogbu tube mmepụta akụkọ ihe mere eme
N'afọ ndị 1960 n'ihi nchọpụta nke nnukwu igwe ihe atụ atọ dị elu (nke a maara dị ka Transval mill), ụzọ ndị a amalitela ngwa ngwa. Ihe e ji mara ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ bụ ntụgharị ọsọ ọsọ nke ụzọ mbata na azụ ihe ntụgharị na-abịa ịgbanwe Rolling Angle, si otú a na-egbochi ọdụ site formi ...
172020 / Nọvemba
Enweghị nsogbu anwụrụ nhazi ọkwa
1. Nhazi site na usoro mmepụta (1) ọkpọkọ na - enweghị ntụpọ - ọkpọkọ na - ekpo ọkụ ọkụ, ọkpọkọ akpọre akpọrọ oyi, ọkpọkọ adọtara akpịrị, ọkpọkọ extrusion, nkedo nkedo (2) ọfụma a na - agbanye (a) Dabere na usoro - arc welding pipe, resistance welding pipe ( elu ugboro, ala ugboro), gas ịgbado ọkụ anwụrụ, furna ...
Okwu Mmalite ka Enweghị nsogbu anwụrụ
Enweghị nsogbu square anwụrụ bụ ụdị ogologo ígwè na oghere oghere na ọ dịghị nkwonkwo gburugburu ya. na ndị ọzọ siri ike ígwè, ígwè tube bụ ụdị ...
17 Ala, ụlọ Xingmei, Liaocheng Shandong mpaghara, China.
managerli @ hongyi ihe onwunwe.com